Hir-Shabeelle oo hal sabab garoomadeeda ugu mamnuucday duullimaadyada qaar | Xaysimo
Home War Hir-Shabeelle oo hal sabab garoomadeeda ugu mamnuucday duullimaadyada qaar
Hir-Shabeelle oo hal sabab garoomadeeda ugu mamnuucday duullimaadyada qaar
Warqad kasoo baxday xaafiiska madaxweynaha maamulka Hir-Shabeelle Maaxmed Cabdi Waare ayaa lagu dalbaday in la joojiyo duullimaadyada tayidka ah ee ka dega magaalooyinka uu ka arimiyo maamulka Hir-Shabeelle.
Qoraalka ayaa lagu sheegay in aan in duullimaad gaar ah oo aan fasax heysan uusan kasoo degi karin garoomada deegaannada Hir-Shabeelle, waxaana sababta lagu tilmaamay in amarkani la xariiro xaaladda deg dega ah ee dalku galay.
“Anaga oo tix gelinayna xaaladda caafimaad ee deg dega ah ee wadanku ku jiro, gaar ahaan dowlad goboleedka Hir-Shabeelle, waxaan ha kinay dhamaan duullimaadyada rayidka ah ee soo aada Hir-Shabeelle, sidaas darteed waxaan idinka codsaneynaa in aad naga tala gelisaan duullimaadyada oo soo dalbada codsi gaar ah”ayaa lagu yiri qoraalka kasoo baxay xaafiiska Madaxweynaha Hir-Shabeelle Waare.
Sidoo kale warqadan ayaa lagu cadeeyay in Hir-Shabeelle aysan ogolaan doonin duullimaad rayid ah oo aan fasax ka heysan in uu mar dambe kasoo dego garoomada maamulkan, waxaana la fasaxay oo sidoodii duullimaadyada u sii wadan kara, diyaaradaha sida gurmadka iyo samafalka ee UN-ka iyo AMISOM.
“Ma ogolaan doono duullimaad aan heysan fasax gaar ah, ee ay wada gaareen wasaaradda iyo dowlad goboleedka Hir-Shabeelle, duullimaadyada gurmadka iyo samafalka ee UN-ka iyo AMISOM, waxay ku soconayaan sidii hore ay u qorsheysteen”ayaa sidoo kale lagu yiri go’aankan kasoo baxay Hir-Shabeelle.